Mareykanka Oo Farmaajo ku canaantay xilkaqaadistii Taliye Urur - Warar Sugan - Soomaaliya iyo caalamka
HomeWararkaMareykanka Oo Farmaajo ku canaantay xilkaqaadistii Taliye Urur
Kadib kulan ku dhexmaray Villa Soomaaliya shalay saraakiil Maraykan ah iyo Madaxweynaha Soomaliya, Farmaajo, ayaa la sheegayaa in ay saraakiisha Maraykanku canaan xoog leh usoo jeediyeen farmaajo iyagoo ku xanaantay xil ka qaadis uu Agaasimaha Nabadsugiddu, Fahad Yaasiin, ku sameeyey Taliyihii Ciidamada Danab.
Xog hoosaad la helayo ayaa muujinaysa inuu Farmaajo cudur daar ka bixiyey arrintaasi isla markaana uu ku tilmaamay in ay ahayd khalad farsamo oo dhacay. Taliyaha Ciidamada Danab ee xilka laga qaaday ayaa ahaa nin ay heyba ahaan is xigaan ra’iisal wasaarihii Xilka laga qaaday, Khayre. Saraakiisha Maraykanku waxay amar ku bixiyeen in taliyihii xilka laga qaaday lagu soo celiyo jagadiisii.
Awoodda ciidamada xoogga dalka ayaa gebi ahaanba waxaa la hoos geeyey Taliyaha Hay’adda sirdoonka ee NISA, Fahad yaasiin, taasina waa sababta keentay inuu cidduu doono uu xilka qaadis ku sameeyo.
Dhinaca kale, Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ee Mucaaradka ah C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa walaac ka muujiyay waxa uu ugu yeeray isku milanka Taliska Nabadsugida iyo Taliska Xoogga dalka.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku sheegay in Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka uu toos uga amar qaato Taliyaha Nabadsugida, isagoo intaa ku daray in amarada xil ka qaadis, dalacsiin, shaqo ka joojin iyo bedelaad maalmihii la soo dhaafay ka socotay Ciidanka Xoogga dalka ay ahaayeen kuwo loo adeegsanayo dano siyaasadeed, eex qabiil iyo ku takrifal awoodeed.